‘कसले चलाएको टीम गुट हो ? कसले चलाएको पार्टी ?’‘कसले चलाएको टीम गुट हो ? कसले चलाएको पार्टी ?’ – Naya Page
‘कसले चलाएको टीम गुट हो ? कसले चलाएको पार्टी ?’
काठमाडौं, ३ पुस : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटि सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार नेता विष्णु रिमालले सरकारको बचाउ गरेका छन् ।
पार्टी मुख्यालयमा विहिबार बसेको स्थायी कमिटि बैठकमा नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा धारणा राख्दै रिमालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति पूर्वाग्रह राखेर आलोचना गरिएको भन्दै त्यसको बिरोध गरे । उनले बैठकमा भने, ‘ एउटा नमज्जा लागेको कुराः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो? त्यो पनि बरिष्ट कमरेडहरुबाट? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र ?
उनले सरकार असफल हुँदा एक प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मात्रै असफल नहुने बताए । उनल भने, ‘त्यसले पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुलाई पनि पिर्छ। असफलताको जगमा कहाँ नयाँ सफल महल उभिएला र ?’
नेता रिमालले पार्टीभित्र फैलिएको भनिएको गुटको बारेमा प्रश्न चर्को प्रश्न समेत गरे । उनले सोधे, ‘एउटा चाँहि स्पष्ट होऔं– कसले चलाएको टिम गुट हो कसले चलाएको पार्टी ? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुझ्दा ? व्यवहारमा ओर्लिउँ । हावामा घुस्सा नचलाऊँ ।’
रिमालले राखेका सुझावहरु :
कमिटी– कमिटीको लागि, ‘मानका खातिर मान’ पु-याउनका लागि हैन कामका लागि हुनुपर्छ। केन्द्रमा– २ अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायि कमिटी, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा– त्यस्तै अङ्ग, जिल्लामा– त्यस्तै, ७५३ तह त्यस्तै? हालत भद्दा कमिटीका जञ्जालमा अल्झिएर लड्ने स्थितिको छ।
– टिकटको आकाँक्षा नराख्ने र संसदीय फाँटमा तुलनात्मक रुपमा कम्फर्टेवल साथीहरुलाई छोड्न चाहनेहरुलाई हामी मौका मिल्ना साथ आप्नै वडामा पनि चुनाव नजित्ने पाङ्ग्रे भन्दै कमरेडली व्यवहार देखाउँछौं। पार्टीमा सबै टिकटका आकाँक्षी हुँदैनन्। स्पष्ट होऔं। एकातिर जनताबाट चुनिएको साथी छ, उ स्थापित हुँदा हाम्रो पार्टी स्थापीत हुन्छ। अर्कातिर त्यसैको अवसानमा भविष्य देख्नेलाई पार्टी सत्ताको निर्णायक बनाउनु पर्छ भने जस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो छ। जनताले चुनेका एकातिर, परिक्षण हुन बाँकीलाई नियन्त्रक बनाउने बाटो लोकतान्त्रिक होला र? “सबै नेता, सबै जनता” दुनियाँमा कहाँ चल्छ?
– एउटा चाँहि स्पष्ट होऔं–– कसले चलाएको टीम गुट हो कसले चलाएको पार्टी? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुभ्दा? व्यवहारमा ओर्लिउँ। हावामा घुस्सा नचलाउँ।
– सरकारः सामान्यकृत गर्न खोजेको हैन। हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम ग-यो भनिएको जानकारी मलाई छैन। मरेपछि नेता महान हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं। एउटा नमज्जा लागेको कुराः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो? त्यो पनि बरिष्ट कमरेडहरुबाट? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र?
– केन्द्रको काम भइनै रहको त प्रतिवेदनले नै बोल्यो। तर जनतासंग जोडिएका आम विषय तथा स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको :-
– अभियानः जनसंगठन एकीकरण टुङ्याउँ। कतिपय जनसंगठनका आफ्नै बार्षिक कार्यक्रम छन्, प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रेरित गरौं।